अच्युत कंडेल : April 2020
आज नयाँ वर्ष, बिहान सबेरै उठी नारायणी स्नान गर्न भनेर हर्केकी आमा निस्किन्छिन्। नारायणी नदी किनार श्रद्धालु भक्तजनहरूले भरिभराउ हुन्छ। अलिकता ठाउँ देख्छिन् अनि सूर्य देवता भन्दै जल चढाउँछिन्। रक्षा गर हरि भन्दै छेउमा जल लैजाने भनेर राखेको डिब्बा खोज्छिन्। भेट्दिनिन्। "मुर्दार कुन चैं ले टप्काएछ, त्यसका हात त ठुनुक्कै हउन्" सराप्दै छेवैको मजेत्रो समाएर निस्कन लाग्दा डिब्बा देख्छिन्। धन्य प्रभु भन्दै जल भर्छिन्। गाडीमा आउँदै गर्दा कसैले छोइदिन्छन् कि भनेझैं अलग्गै बस्छिन्। ओर्लँदा एउटी अधबैंसे महिलासँग ठोक्किन पुग्छिन्। फेरि के-के भनेर सराप्छिन्। सह-चालकलाई पैसा अलग्गै दिएर घर पुग्छिन्, ठुलै धर्म-कर्म गरेजस्तो गरेर।
"धारणात् धर्म ईत्याहु: धर्मो धारयते प्रजा:"
धर्म भनेको धारणा गर्ने कुरो हो। किसानको धर्म के हो? चिकित्सकको धर्म? गुरूको धर्म? सिपाहीको धर्म? बाबाको धर्म? आमाको धर्म? सन्तानको धर्म? धर्तीको धर्म? आकाशको धर्म? प्रकृतिको धर्म? धर्ती, आकाश, प्रकृतिले आफ्नो धर्म निभाएजस्तै सबैले यथास्थानबाट आ-आफ्नो धर्म निर्वाह गरे बल्ल प्रजाको खुशी मिल्दछ। सभ्य समुन्नत समाजको कल्पना गर्न सकिन्छ।
मेरो प्रश्न धर्मलाई भने फिटिक्कै होइन। म धर्मलाई प्रश्न गर्न सक्दिनँ। म कुनै ज्ञाता होइन र दक्षता पनि छैन। बस्, त्यो ढुङ्गामुनि छ कि? ए, छैन रहेछ! त्यो परको ढुङ्गामुनि त पक्कै होला भन्दै पल्टाउन लालायित मनुष्य भने हुँ। खैर, ढुङ्गामुनि उही हिलो माटो र बालुवा मात्रै। न पोलेर ईंट बनाउन मिल्ने न चालेर सुन निकाल्न नै!
👨 अच्युत कंडेल 📆 12 April4comments: